जबरजस्ती बिहे गर्न किशोरीको ‘अपहरण’! – जुगल टाईम्स
जबरजस्ती बिहे गर्न किशोरीको ‘अपहरण’!
Posted on १५ बैशाख २०७७, सोमबार १९:१८ Author जुगल टाईम्स	Comment(0)
बिहे गर्न भन्दै लगिएकी बझाङ छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका वडा नं ७ बुडखोरीकी १५ वर्षीया किशोरीको उद्धार गरिएको छ।
छिमेककै केही व्यक्तिले बिहे गर्ने भन्दै किशोरीलाई शनिबार राति जबरजस्ती लगेर गएको तर स्थानीयले किशोरीको उद्धार गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका डिएसपी गणेश बमले फुपूको घरमा खाना बनाउन गएका बेला किशोरीलाई सात जनाले विवाह गराउने भनेर लगेको पाइएको जानकारी दिए।
‘जबरजस्ती बिहे गर्ने भन्दै किशोरीलाई फुपूको घरमा खाना बनाउन लागेका बेला उठाएर लगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यहाँबाट उनलाई एक घण्टा टाढाको गोठमा एकदिनसम्म राखिएको पाइएको छ,’ उनले भने,’थप अनुसन्धान हुँदैछ।’
अर्को दिन नजिकैको एक जना स्थानीयले थाहा पाएर किशोरीका आफन्तलाई खबर गरेका थिए। पछि स्थानीयले उनको उद्धार गरी स्वास्थ्य चेकजाँचका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको डिएसपी वमले बताए।
जबरजस्ती बिहे गर्न खोजेका ती व्यक्तिविरूद्ध शरीर बन्धक तथा अपहरणको मुद्दा चलाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ।
घटनामा संलग्नहरूको खोजी र थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी चौकी विसौनाबाट टोली खटिएको डिएसपी वमले बताए।
अहिले पीडित किशोरीलाई चैनपुरको सेभहाउसमा राखिएको छ।
किशोरीका बुवाको मृत्यु भैसकेको र आमाले दोस्रो बिहे गरेपछि उनी आफन्तकहाँ बस्दै आएकी थिइन्। बझाङमा किशोरीको चाहनाविपरीत जबरजस्ती बिहे गर्ने चलन छ। किशोरीका आफन्तसमेत रहेका वडा सदस्य कलक धामीले अपहरण शैलीमा बिहे गर्न नपाइने बताए।
छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका ७ का वडा अध्यक्ष पदम मण्डेलले पछिल्लो केही वर्षयता यस्ता घटनामा कमी आएको भए पनि जबरजस्ती बालविवाह र जबरजस्ती बिहे गर्ने घटना भने नरोकिएको बताए।
Posted on १६ बैशाख २०७७, मंगलवार ०९:३५ Author जुगल टाईम्स
सातादिन अगाडि भेटेका व्यक्तिलाई कोरोना भएपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको कोरोना परीक्षण हुने
Posted on १० बैशाख २०७७, बुधबार १०:४९ Author जुगल टाईम्स
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। खानले साता अगाडि भेटेका पाकिस्तानका प्रख्यात समाजसेवी फैसल एधीलाई कोरोना संक्रमण भएको प्रमाणित भएपछि खानको परीक्षण गर्नुपर्ने भएको हो। मंगलबार उनका डाक्टरले कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘म उनीलाई भेट्नेछु र परीक्षणको सिफारिस गर्नेछु। हामी सबै प्रोटोकललाई पछ्याउने छौं र त्यसै अनुरुप सिफारिसहरू गर्नेछौं’, खानका […]
यौन सम्पर्क कम गर्ने महिलाको महिनावारी चाँडै राेकिने, रोगको पनि खतरा
Posted on ८ बैशाख २०७७, सोमबार २०:४९ Author जुगल टाईम्स
धेरै कम यौनसम्पर्क गर्नेहरुको चाँडै महिनावारी रोकिने एक अध्ययनले पत्ता लागेको छ। अनुसन्धानकर्ताले सप्ताहमा एकपटक यौनसम्पर्क गर्नेहरु भन्दा महिनामा एकपटक यौनसम्र्पक गर्नेहरु २८ प्रतिशतले चाँडै महिनावारी रोकिएको पत्ता लगाएका हुन्। यौनसम्पर्कका कारणले शारीरिक रुपमा गर्भवती हुने अंगहरु क्रियाशिल भइरहने भएकाले महिनावारी राकिंदैन। जब कि अर्धवैंशे उमेरका महिलाले शारीरिक सम्पर्क गर्न छोडेपछि महिनावारी हुने दर घट्छ। […]
मकाउमा नेपालीहरु संगठित